श्रृंखला खतिवडाको नेपालहरुलाइ भाबुक बनाउने भिडियो, अझै पनि ढिला भएको छैन ! – Complete Nepali News Portal
श्रृंखला खतिवडाको नेपालहरुलाइ भाबुक बनाउने भिडियो, अझै पनि ढिला भएको छैन !
ScotNepal December 2, 2018
मिस वर्ल्डको इतिहाँसमा नै नेपाल पहिलो पटक यसरी नजिक पुगेको छ । शृंखला खतिवडा ‘मिस वर्ल्ड २०१८’ को ताज नेपाल भित्राउनको ३ करोड नेपालीहरुले धेरै शुभकामना दिइरहेका छन्। विश्वभरका १२१ देशले भाग लिएको विश्व सुन्दरी प्रतियोगीतमा यसपटक नेपाली चेली शृंखला खतिवडाले राम्रो चर्चा कमाइरहेकी छिन् ।
हेर्नुहोस उनले भनेको भिडियो जस्ताको जस्तै र टोप ४ सम्म अरु कुन देशका सुन्दरी हरु परे त ।